काठमाडौं, २ जेठ । संसारकै १५९ औं नम्बरका अर्बपतिको कुरा । एउटा पत्रकारले महिनौंको मेहेनतमा तयार पारेको भाषाले किताब बन्यो । किताबले संघर्षकालीन कथासँगै बौद्धिक प्रतिष्ठा पनि कमायो । तर, लेखिदिने पत्रकार मरेर गए ।
न तिनलाई दिन्छु भनेको कुरा दिइयो, न आँशुमा डुबका सन्तानको लागि केही भयो । हजुर, उनै अर्बपति विनोद चौधरीले एउटा पार्थिक शरीरका अगाडि खाएको कसम पूरा नगर्दा पत्रकार परिवार आज पनि आँशुमा डुबिरहेको छ ।
पाँच वर्षअघि विनोद चौधरीको आत्मकथाको अंग्रेजी संस्करण लेखिदिने पत्रकार सञ्जीव घिमिरेसित मन बुझ्ने गरी पारिश्रमिकको शर्त थियो । काम सकिएको राती स्याम्पेन फोरेर भोज चल्यो । मदिराको स्वादसँगै राती हाँसीखुसी बिदा गरिए । तर, सञ्जीवले भोलिपल्टको उज्यालो हेर्न पाएनन् ।
विहानै ह्दयघात भयो । मैतिदेवीबाट चाबहिलस्थित मेडिकेयर अस्पताल लैजाँदा बाटैमा प्राण त्यागे । रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकका डेस्क सम्पादक थिए, ३८ वर्षीय सञ्जीव । चर्चित चाँदबाग स्कुलका साहुजी पनि हुन् चौधरी ।
हुन्छ दिन्छु भन्न बाँकी नराख्ने, तर बोवलेको नपुर्याउने अर्बपतिले सञ्जीवका सन्ततीको पूरै पढाई व्यहोर्ने बाचा गरेका थिए, पशुपति आर्यघाटमा । भारत माइती भएकी अनिता ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा प्रशासनतर्फ जागिरे हुन् । सञ्जीवको निधन हुँदा पतिको अन्तिम नासो काखमा थियो, सक्षम ।
ठूलो छोरा सुगम भर्खरै कक्षा २ मा पुगेका थिए । सुगमलाई सुम्सुम्याउँदै विनोदले आँशु चुहाए र भने, बाबुको पढाई अब मेरो जिम्मा है ! चार वर्षसम्म अर्थात् पोहोर कक्षा ६ मा पुग्दासम्म ताकेता गरेपछि अप्ठेरो मान्दै मान्दै चौधरीको सानेपास्थित कार्यालयबाट पैसा दिने गरिएको थियो ।
तर, अहिले सुगम कक्षा ७ मा पुगे । महंगो पढाई खर्च हुने ग्यालेक्सीमा पढ्छन् । कान्छा सक्षम न्यु समिट स्कुलमा छन्, उत्तकै महंगो पढाई । कक्षा २ मा पुगे । नाताले सञ्जीव महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाती हुन्, कान्छी छोरीका छोरा । तर, महाकविको नाताले यो महानगरमा बाँच्न कहाँ सकिन्छ र ?
काम लगाएर, कामको पैसा नदिएर, विहान प्राण जाने गरी रातभरि रक्सी खुवाएर एउटा पत्रकार परिवारको चिहिल बिहिल गराउने विनोद अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट सांसद छन् । त्यो परिवारलाई उनीबाट करोड र अर्ब चाएिको छैन ।
अरु हिसाब नगरौं, सांसद भएर पाउने मासिक पारिश्रमिक र सुविधा गर्दा कम्तीमा ४० हजार पाउँछन् । अर्बपतिका लागि ४० हजार त के हो ? त्यही नै दिए पनि सञ्जीवको आत्माले शान्ति पाउँथ्यो होला । तर, रंगमञ्जका तमासेजस्तो पर्दा खुलुञ्जेल फूलझैं चम्किने र पर्दा बन्द हुँदा ब्वाँसोझै डुक्रिने अर्बपति परेपछि के लाग्छ र ?
चौधरीले चार वर्ष सुगमको पढाईका लागि दिने भनिएको पैसा लिन वर्षेनी भिखारीझैं उनको अफिसमा धाउनुपर्ने, त्यस्तो गर्दा पनि लाग्ने भन्दा कम पैसा दिएर पठाउने गरेका थिए । तर, यो वर्षदेखि नआउनुहोला भनी मूलगेटबाटै फिर्ता पठाइयो ।
यसबारे पत्नी अनितालाई फोनमा सोध्दा भनिन्, दिन्छु भन्नुभा हो, चार वर्ष त दिनु पनि भयो । तर, अहिले बन्द छ । उनले यसबारे थप प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् । पछि कुरा गरौंला भन्दै फोन राखिन् । त्यसो त बचन दिँदै पूरा नगर्ने चौधरीको आदत पुरानै हो । सञ्जीव त टाढाका भए ।
आफैंलाई जन्मदिने आमा गंगादेवीको पार्थिक शरीरका अगाडि, आर्यघाटमै प्रण गरेको कुरा पनि पूरा गरेका छैनन् । बागमतिमा ढल बगिरहेको देखेर भनेका थिए, आमाको नाममा म यो पानीलाई पिउन योग्य बनाउँछु, आफ्नै खर्चमा, जनआस्थामा उल्लेख छ ।
आमाको निधन भएको १८ वर्ष बितिसक्यो । शुरु शुरुमा त जल निर्मलीकरणका प्रविधि ल्याउने, पानी कञ्जन बनाउन क्लोरिनलगायतका औषधी हाल्नेजस्ता काम गर्न खोजेजस्तो गरे । तर, ६ महिनामै आमाको नाममा गर्छु भनेको कुरा नै भुलिदिए । अहिले पशुपतितिर ग एभने मास्कले नाक छोप्ने गर्दछन् ।